डेल्टा बाथरूम नल समीक्षा
घर / नल गाईड / डेल्टा बाथरूम नल समीक्षा: २०२१ डेल्टा बाथरूम नलका लागि खरीद मार्गनिर्देशन
2021 / 02 / 03 वर्गीकरणनल गाईड 1516 0
जब तपाईं पहिलो पटक तपाईंको घरमा हेर्नुहोस्, तपाईं समग्र शैली र अवधारणा देख्नुहुनेछ। चाहे तपाईं आधुनिक, देहात, परम्परागत, वा समकालीन रूपको लागि लक्ष्य गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको घरले तपाईंलाई निश्चित आवाज दिन्छ जब तपाईं ढोकामा हिड्नुहुन्छ।
जब तपाईं नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, यद्यपि यो सबै विवरणहरू हुन् जुन तपाईंको शैलीलाई जीवन्त बनाउन मिल्दछ। तपाईंको faucets तपाईंको भान्सा कोठा मा ती महत्वपूर्ण विवरणहरू, साथै तपाईंको बाथरूममा छन्।
जब तपाईं उत्तम faucets को लागी खोजी, गुणवत्ता एक मुख्य विचार हो किनभने कोही पनि आफ्नो faucets प्रति केहि बर्षहरु बदल्न चाहँदैन। एक नेता बाकीको माथि खडा हुन्छ जब यो गुणको लागि आउँदछ: डेल्टा नल।
डेल्टा faucets खरीद को लाभहरु
डेल्टा नल नल नवीनता को लागी सधैं अगाडि हुन्छ। तिनीहरूले टच जस्ता टेक्नोलोजीहरू विकास गरेका छन्2O, एक टच सेन्सर जसले नल खोल्छ र बन्द गर्दछ। तिनीहरू म्याग्नाइट कागजात पछाडि जीनियसहरू पनि हुन्, जसले नल टाउको सुरक्षित गर्न म्याग्नेट प्रयोग गर्दछ जब तपाईंले विस्तारित नली प्रयोग गर्नुहुन्न। तिनीहरूको सबैभन्दा रचनात्मक टेक्नोलोजी मध्ये एक एच हो2ओकिनेटिक टेक्नोलोजी, एक शावरहेड इनोवेशन जसले पानी संरक्षण गर्दछ र यस्तो बनाउँदछ जस्तो कि तपाईं एक उच्च मात्राको स्नान पाउँदै हुनुहुन्छ।
तिनीहरूको अनुपम सुविधाहरूको शीर्षमा, डेल्टा नल उच्च-गुणवत्ता निर्माण र उनीहरूको सबै उत्पादनहरूको लागि सीमित आजीवन वारेन्टी एकीकृत गर्दछ। तपाईं विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईं एक उत्तम उत्पाद पाउँदै हुनुहुन्छ, र यदि एक दुर्लभ त्रुटि देखापर्दछ भने, डेल्टाले तपाईंलाई कभर गरेको छ।
डेल्टा नलको उत्पादहरूको विस्तृत क्याटलगको साथ, यद्यपि कसरी तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ जुन तपाईंको घरको लागि उत्तम फिट हो? तपाईंको भान्छा र बाथरूमको लागि डेल्टा नलका उत्पादनहरूको लागि हाम्रो शीर्ष छनौटहरूमा डुबौं।
शीर्ष डेल्टा बाथरूम नलहरू
तपाईंको बाथरूम एक ओएसिस हो जहाँ तपाईं एकान्तमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ, तर कोठामा प्रत्येक चीज तपाईंले महसुस गर्नुहुने शैली र शैलीलाई असर गर्ने छ। सम्भव भएसम्म सहज र सजिलो अनुभव बनाउँदा सही नलको छनौटले तपाईंलाई उत्तम रूप दिन्छ। यदि तपाईं त्यस आदर्श नलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने उत्तम डेल्टा स्नानगृह नलको लागि हाम्रा शीर्ष छनौटहरू जाँच गर्नुहोस्।
१. आधुनिक एकल छेद बाथरूमको नल
एक आधुनिक हेराई सफा, पातलो लाइनहरू बारेमा मात्र हो, र तपाईको बाथरूममा सफाई भन्दा राम्रो वातावरण के हुनुपर्दछ? तपाईसँग धेरै आधुनिक नक्कलको साथ धेरै नलहरू फेला पार्न गाह्रो समय थियो आधुनिक एकल छेद बाथरूम नल 567 XNUMXLF-PP.
पप-अप ड्रेन असेंबली शामिल
यस नलको सब भन्दा उल्लेखनीय सुविधा यसको एकल-ह्यान्डल अपरेशन हुन सक्छ। तपाईलाई चाहिएको उत्तम पानीको तापक्रम प्राप्त गर्न सजिलो छ, विशेष गरी तपाईंको अनुहार धुँदा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकल ह्यान्डल प्रबन्धन गर्न पनि सजिलो छ यदि तपाईंको हात मैला छन् वा तपाईं आफ्ना युवा बच्चाहरूलाई तिनीहरूको हात धुनुहोस्।
यो नल पनि यसको पानी संरक्षणको कारण डेल्टाको वाटरसेन्स लेबलको लागि योग्य छ। वाटरसेन्स faucets मानक faucets भन्दा करीव २०% कम पानी प्रयोग गर्दछ।
२. लहरा चौडाई--होल बाथरूमको नल
लाहारा डेल्टाको सबैभन्दा लोकप्रिय बाथरूम faucets मध्ये एक हो, र यो कन्फिगरेसनको विभिन्न प्रकारमा आउँदछ। तपाईले चाहानु भएको शैली र तपाईको काउन्टरटप वा भ्यानिटीको कन्फिगरेसनमा निर्भर गर्दै Lahara चौड़ा 3-होल बाथरूम नल 3538-CZMPU-DST उत्तम फिट हुन सक्छ।
हीरा सील टेक्नोलोजी
InnoFlex PEX आपूर्ति लाइनहरु
चार समाप्त विकल्पहरू
व्यापक थ्री होल स्थापनाको लागि डिजाइन गरिएको
Lahara क्लासिक डिजाइन कुनै पनि बाथरूम मा सूक्ष्म छ, लगभग कुनै पनि सजावट शैली फिट। गुणवत्ता सधैं डेल्टा नलको शीर्ष प्राथमिकता हुन्छ, यद्यपि, र लहरा निराश हुँदैनन्।
यस नलमा डेल्टाको अनौंठो डायमंड सील र तिनीहरूको InnoFlex PEX आपूर्ति लाइनहरू छन्, सबै चुहावट रोक्न र तपाईंको नल लामो समयसम्म मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ। जबकि यस मोडेल यस सूचीमा सब भन्दा महँगो नलको लागि लगभग बाँधिएको छ, यो एक लगानी हो जुन तपाईं धेरै वर्षसम्म टिक्न आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
La. Lahara Centerset बाथरूम नल
तपाईं लहरा शैलीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ तर तपाईंले आफ्नो बाथरूम काउन्टरटप स्थापना गरिसक्नु भएको छ र यो कन्डन्स्ड थ्री-होल कन्फिगरेसन भएको छ, फराकिलो छैन। तपाईं भाग्यबाट बाहिर हुनुहुन्न, किनकि डेल्टासँग एक छ Lahara केन्द्र बाथरूम नल 2538-CZMPU-DST धेरै।
यस केन्द्रसेट मोडेलमा सबै लहरा शैली र सुविधाहरू छन् जुन तपाइँलाई थाँहा छ र माया गर्नुहुन्छ तर एउटा कन्फिगरेसनको साथ जुन चार इन्च स्थापना फिट हुन्छ। डेल्टाले स्थापनालाई सकेसम्म निर्बाध पार्छ पप-अप ड्रेन असेंबली साथै नलको साथ एकीकृत आपूर्ति लाइनहरू समावेश गरेर।
जबकि डेल्टाको डायमंड सील टेक्नोलोजी यस विशेष नलको लागि अद्वितीय छैन, यो कुरा गर्न लायकको एक सुविधा हो। सटीक वाल्व चार गुणा लामो हुन्छ अन्य दुई faucets मा मानक भल्भ भन्दा लामो, तपाईं आफ्नो खरीद अन्तिम आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
Hay. हेडवुड सेन्टरसेट बाथरूमको नल
हाम्रो सूचीमा अहिलेसम्म सबै faucets समकालीन वा आधुनिक दायरा मा कहीं भएको छ। यदि तपाईं अधिक परम्परागत रूप मन पराउनुहुन्छ भने हेवुड केन्द्र बाथरूम नल क्रोम 25999LF तपाइँको गल्ली ठीक हुनेछ।
तीन समाप्त विकल्पहरू
हाईवुड धेरै तरीकाले अद्वितीय छ हाम्रो सूचीमा अन्य डेल्टा बाथरूम نلहरूको तुलनामा। सुरूवातकर्ताहरूको लागि, यो उच्च आर्थिक लहर लहर मोडेलको मूल्यको लगभग २%% मा सबैभन्दा किफायती विकल्प हो।
आकर्षक मूल्य ट्याग बाहेक, हेवुड हाम्रो सूचीमा सबै नलहरू मध्ये सब भन्दा छोटो छ। यसको टाउको 4.68..XNUMX इन्च माथि छ, जबकि अन्य मोडेलहरू करीव सात इन्च अग्लो छन्।
शैली एक शीर्ष कारण हो त्यसैले धेरै घरमालिकहरूले हेवुडलाई छान्छन्, यद्यपि। योसँग परम्परागत रूप छ जसले बल्ब र बग्ने बक्रलाई समेट्छ, यसले न्यानो परिवारको अनुभव वा ओल्ड हलिउड लुकको साथ बाथरूमको लागि आदर्श बनाउँदछ।
La. Lahara एकल छेद बाथरूम नल
सानो ठाउँहरूमा वा पाउडर कक्षहरूको लागि बाथरूमहरूको लागि, एकल प्वाल स्थापना सामान्य छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यो लोकप्रिय Lahara ले तपाइँको बाथरूम को लागी विचार गरीएको छ, फेरि सोच्नुहोस् र एक नजर राख्नुहोस् Lahara एकल छेद बाथरूम नल 538-CZMPU-DST.
एकल-प्वाल वा तीन-होल स्थापना फिट गर्दछ
जस्तो तपाईले अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, यस मोडेल अन्य लहरा मोडेलको एकल-प्वाल संस्करण हो। बहुमुखी प्रतिभाको लागि, यद्यपि यसले वैकल्पिक डेक प्लेट पनि समावेश गर्दछ त्यसैले तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग चार इन्च तीन होल स्थापना छ।
यस नल संग पनि विचार गर्न केहि अद्वितीय कारकहरू छन्। सबैभन्दा पहिले, यो लगभग सात इन्च लम्बाईमा अन्य लाहरा मोडेलहरू भन्दा अग्लो छ। तपाइँको ठाउँ मापन गर्न निश्चित हुनुहोस् र नल फिट हुनेछ भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
यस लहरा मोडेलमा टच थप्ने विकल्प छ2हे टेक्नोलोजी: डेल्टाको आविष्कार जसले तपाईंलाई आफ्नो हात वा कुहिनोको टचको साथ नल खोल्न र बन्द गर्न अनुमति दिन्छ। यो नलमा आफैंमा नपार्न गडबडी हातहरू धुनु उत्तम छ।
नींव एकल ह्यान्डल नल
सबैजना चाहँदैनन् कि उनीहरूको नल उनीहरूको बाथरूमको मुख्य भाग होस्। यदि तपाईं केवल आधारभूत, कार्यात्मक, उच्च-गुणवत्ताको नल चाहनुहुन्छ भने, तपाईं परिपक्व उम्मेदवार हुनुहुन्छ नींव एकल ह्यान्डल नल.
किफायती मूल्य ट्याग
दुई समाप्त विकल्पहरू
फाउन्डेसन नलमा कुनै प्रकारका ताँतीहरू नहुन सक्छ, तर तिनीहरूलाई आवश्यक पर्दैन। यस नलको सरल शैली र कम्प्याक्ट डिजाइनले कुनै पनि बाथरूमको लागि यो उत्तम बनाउँदछ, र यसको सस्तो मूल्य पनि लाभ हो।
तपाईको सुविधाको लागि, फाउन्डेशन नल पप-अप ड्रेन समावेश गर्दछ। यो तीन-होल, चार इन्च स्थापनाहरू फिट गर्न डिजाइन गरिएको छ र यो तपाईंको क्रोम र स्टेनलेस दुबैमा उपलब्ध छ तपाईंको बाथरूमको लुक पूरक गर्न।
तपाईंको डेल्टा बाथरूमको नल छनौट गर्दै
तपाईं डेल्टा बाथरूम नलको साथ गलत जान सक्नुहुन्न। तपाईंको काउन्टरटपमा एकल-प्वाल, कन्डेन्स्ड थ्री-होल, वा व्यापक तीन-होल कन्फिगरेसन छ, त्यहाँ तपाईंको आवश्यकता र तपाईंको शैली अनुरूप विकल्पहरू छन्।
ट्यागबाथरूम faucets	अघिल्लो :: कसरी म्याट कालो रसोईको नल सफा गर्ने अर्को: डेल्टा किचन नल समीक्षा: २०२१ डेल्टा किचन नलका लागि किन्ने मार्गनिर्देशन
2021 / 06 / 22 270
2021 / 05 / 09 4191
2021 / 05 / 08 1744
2021 / 02 / 04 3013
2021 / 02 / 03 1556